Izimpahla ezilungiselelwe anti-uv eziphefumulayo plain bamboo polyester ihembe lendwangu abakhiqizi nabaphakeli | I-Yun Ai
Izimpahla Ready anti-UV esiwuhogelayo plain bamboo polyester ihembe Indwangu
Ulapha: ekhaya - Imikhiqizo - Izimpahla Ready anti-UV esiwuhogelayo plain bamboo polyester ihembe Indwangu
Indwangu ye-bamboo fiber ingasetshenziselwa ukwenza indwangu yehembe. Inezici ezine: anti-mibimbi yemvelo, anti-uv, ukuphefumula nokujuluka, ukuvikelwa kwemvelo kanye nempilo.
Ngemuva kokuthi izindwangu eziningi zehembe zenziwe zaba izingubo esezenziwe ngomumo, ikhanda elibuhlungu kakhulu yinkinga yokulwa nemibimbi, edinga uku-ayina ngensimbi ngaphambi kokugqoka isikhathi ngasinye, okwandisa kakhulu isikhathi sokulungiselela ngaphambi kokuphuma. Indwangu ye-bamboo fiber inokumelana nemibimbi ngokwemvelo, futhi ingubo eyenziwe noma ngabe uyigqoka kanjani, ngeke ikhiqize imibimbi, ukuze ihembe lakho lihlale lihlanzekile futhi lihlelekile.
Ehlobo lombala, ukukhanya kwelanga kukhulu kakhulu, futhi kulula ukushisa isikhumba sabantu. Izindwangu zehembe elijwayelekile zidinga ukufaka izithasiselo ze-anti-ultraviolet esigabeni sekwephuzile ukwakha umphumela wesikhashana wokulwa ne-ultraviolet. Kodwa-ke, indwangu yethu yoqalo lwe-bamboo yehlukile, ngoba izakhi ezikhethekile ku-bamboo fiber entweni eluhlaza zingamelana ngokuzenzakalela nokukhanya kwe-ultraviolet, futhi lo msebenzi uzohlala ukhona.
Into NO: 8129 -ukubhala
Ukwakheka: U-50% woqalo u-50% mningi
Ububanzi: 57 ”/ 58”
Intambo Bala: 50S
MOQ / MCQ: 100m / umbala
Izici: Ithambile futhi iphefumula
Ukunethezeka okubaluleke kakhulu kwehembe ukumuncwa komswakama nomsele wamanzi. Indwangu yefayibha yoqalo inamandla kakhulu okuswakama umswakama kanye nomsebenzi wokujuluka womjuluko, ongakhangisa umjuluko esikhunjeni somuntu endwangwini ngesikhathi esifushane, bese uhwamuka emoyeni ngokushisa ukunciphisa izinga lokushisa kobuso bomuntu.
Indwangu yefayibha yoqalo itholakala ku-bamboo, ovuselelekayo futhi ongapheli. Inobungani bemvelo futhi ayinakho ukungcola, ingahle yehliswe ngokushesha futhi ivikele kakhulu imvelo.
Indwangu yefayibha yoqalo nomehluko phakathi kukakotini：
Ifayibha yoqalo imunca amanzi kangcono kunokotini, ngakho-ke izingubo ezenziwe ngofayibha woqalo zinomoya ongcono kakhulu kunokotini.
Ifayibha yoqalo kulula ukuyihlanza kunokotini omsulwa futhi inamandla okumelana nowoyela.
Ubambo lunezindawo ezinhle zokulwa namagciwane. I-bamboo fiber nayo inokumelana okungcono kwe-uv kunokotini.
Ngaphansi kwesimo sokushisa 36 ℃ I-Celsius nomswakama ohambisanayo u-100%, ukumuncwa komswakama kanye nokuvuselelwa komswakama we-bamboo fiber kungama-45%, futhi ukutholakala komoya kunamandla okuphindwe ka-3.5 kunokotini
Izinzuzo OF Indwangu ye-bamboo fiber
Anti-imibimbi akukho-iron, Ithambile futhi ikhululekile, Ukuphefumula.
Kufudumele ebusika futhi kupholile ehlobo, Elwa namagciwane elwa namagciwane.
Imisebe ye-UV, Impilo yemvelo, Ukuvikelwa kwemvelo.
Izici zamahembe we-bamboo fiber
Izembatho ezithambile nezibushelelezi, zoqalo lwe-bamboo zinobuhle obuhle beyunithi nokuzizwa okuthambile; Ubumhlophe obuhle, umbala ogqamile; Ukuqina nokugqoka ukumelana, nokuqina okuyingqayizivele; Strong amandla longitudinal futhi transverse, futhi uzinzile futhi iyunifomu, imidwebo emihle; Ithambile futhi iyivelivethi.
Ukuncipha umswakama, ingxenye yesiphambano se-bamboo fiber igcwele izimbotshana ezinkulu nezincane ze-oval, ingamunca ngokushesha futhi ihwamuke inani elikhulu lamanzi. Ukwehla okungokwemvelo kwesigaba esiphambanisayo kwenza uqalo fibre lokho ochwepheshe embonini bakubiza ngokuthi "ukuphefumula" kwefayibha. I-hygroscopicity yayo, i-hygroscopicity nokutholakala komoya nakho kubalwa kuqala phakathi kwezindwangu ezinkulu zendwangu. Ngakho-ke, izingubo ezenziwe nge-bamboo fiber zikhululekile kakhulu ukugqoka.
I-bacteriostatic ne-antibacterial, i-bamboo fiber ngokwemvelo inekhono elikhethekile le-bacteriostatic, isilinganiso se-bacterioidal of bamboo fiber singama-63-92.8% kungakapheli amahora ayi-12. Ngakho-ke, izingubo ze-bamboo fiber nazo zinomphumela omuhle wokulwa namagciwane.
I-bamboo fiber yinto eluhlaza futhi enobungani bemvelo ekhishwe ku-bamboo wokuqala. Inezici zemvelo zokuvimbela izimbuzane, ukuvimbela iphunga, ukuvimbela izinambuzane kanye nesizukulwane esibi se-ion. Ngokufanayo, bamboo fiber izingubo inezici zokuvikela izimbuzane, ukuvimbela iphunga, ukuvimbela izinambuzane kanye nokukhiqizwa okungalungile kwe-ion. Izinga lokuvimbela i-uv liphindwe izikhathi ezingama-417 kunalelo likakotini, futhi izinga lokuvimba lisondele ku-100%.
Indwangu eluhlaza futhi enobungani bemvelo, u-bamboo fiber yendwangu yenziwa ngezinto ezibolayo, ezingahle zonakaliswe ngokuphelele ngama-microorganisms nokukhanya kwelanga emhlabathini. Le nqubo yokubola ngeke idale ukungcoliswa kwemvelo.
Ukufudumala ebusika nokupholisa ehlobo, indwangu yoqalo ewusebenzisa ehlobo nasekwindla yenza abantu bazizwe bepholile futhi bephefumula ngokukhethekile; Ukusetshenziswa kwenkathi yasebusika neyasentwasahlobo kuyabhibhidla futhi kukhululekile futhi kungaqeda ukushisa okweqile nomswakama emzimbeni, hhayi umlilo, hhayi ukoma.